2018 2019 Jeep Wrangler Nalalka JL Oem Led 9 inch Jeep Nalalka JL Oem Led
Jeep Nalalka Jeep Nalalka Fog Jeep Nalalka dabada Jeep Daar Laydhka Calaamadaha Nalalka hore ee Harley Harley Tail Light Nalalka Baaskiil Baaskiilka Ford Dodge Chevy GMC BMW Land Rover Toyota Truck Nalalka shaqada ee hogaaminaya Baararka Iftiinka Led Gawaarida Kale Ee Sameeya Gargaarka kale
Bogga ugu weyn > Jeep Nalalka > Jeep JL nalka hore ee 2018 +
Naqshadaynta Cusub ee 9 inch 2018 Jeep Wrangler JL LED nalka hore ee DOT SAE Jeep Nalalka JL Led 2018 2019
DOT SAE 2018 2019 Jeep Wrangler Daabacaadda Moo'aab waxay Hoggaaminaysaa Nalalka Hore ee Jeep Wrangler Moo'aab
9 inch hoggaamineed Halo Jeep JL Rubicon Nalalka hore Wrangler JL Iftiinka Suuqa Kadib
Item No .: MS-GX9RD-2
Kuwani Jeep Wrangler JL oem nalka hore ee korantada waa 9 inch oo hogaaminaya laydhadhka tooska ah kuwaas oo ku habboon nalka hore ee halogen si fiican, looma baahna qashin, ku habboon sanadka 2018 2019 Jeep Wrangler JL iyo 2020 Jeep Gladiator JT.
Qaabkan MS-GX9RD Jeep Wrangler JL oem ayaa horseeday nalalka hore ee guriga waa nalka hore ee 9 inch oo halo ah, oo ka duwan noocyada kale ee 7 inch hogaamiya, waxaa lagu rakibi karaa 2018 2019 Jeep Wrangler jl aan lahayn qaylo dhaan, ciyaar fiican Jeep wrangler jl 2018+. Waxay la imaaneysaa 100w 6500lm dogob sare, 30w 3000lm dogob hoose oo leh 22w DRL, heerkul midab cad oo dabiici ah, DOT SAE oo la ansixiyay, amaan ku ah wadada. In kabadan 50000 saacadood oo cimri dherer ah oo leh 12 bilood oo dammaanad ah, iibinta kulul ayaa keentay nalka hore ee baabuurta Jeep Wrangler JL 2018 2019. Waxaan nahay Jeep Wrangler hoggaamiyey soo saaraha laydhka hore ee guriga Shiinaha, waxaan ka qabannaa ganacsi caalami ah, ku soo dhawow baaritaanka.
Hoos waxaa ku qoran vidoe-ka Morsun MS-GX9 Jeep Wrangler jl oem wuxuu hogaamiyay casharrada rakibida nalalka hore iyo dib u eegista.
faahfaahinta of Jeep Wrangler Nalalka JL Oem Led
Number Model MS-GX9RD
model Wrangler JL, Gladiator
aragti 9 inch hogaaminaya nalka hore ee gaariga
Beam Sare 100W 6500LM
Laydhka Hoose 30W 3000LM
color Heerkulka 6000-6500K
Waayo, Jeep Gladiator JT 2020
Muddo 2018 2019 Jeep Wrangler JL
2019 Jeep Wrangler Cayaaraha 2-Albaab
2019 Jeep Wrangler Cayaaraha 4-Albaab
2019 Jeep Wrangler Ciyaaraha 2-Albaab
2019 Jeep Wrangler Ciyaaraha 4-Albaab
2019 Jeep Wrangler Saxaraha 4-Albaab
2019 Jeep Wrangler Rubicon 2-Albaab
2019 Jeep Wrangler Rubicon 4-Albaab
2018 Jeep Wrangler Cayaaraha 2-Albaab
2018 Jeep Wrangler Cayaaraha 4-Albaab
2018 Jeep Wrangler Ciyaaraha 2-Albaab
2018 Jeep Wrangler Ciyaaraha 4-Albaab
2018 Jeep Wrangler Saxaraha 4-Albaab
2018 Jeep Wrangler Rubicon 2-Albaab
2018 Jeep Wrangler Rubicon 4-Albaab
MS-GX9 SEMA 2019
Features of Jeep Wrangler Nalalka JL Oem Led
9 INCH JL HEADLIGHTS - Naqshad gaar ah oo ku habboon Jeep JL, JT (Maaha JK) 2018 2019, bedel fiican ayaa loogu talagalay Jeep JL nalka hore ee asalka ah.
LAGU QAADAY JL HEADLIGHTS - Waa ka iftiin badan yahay JL nalka hore ee korantada ama nalka hore ee kale oo lamid ah, 12000LM High Beam, 6000LM Beam Low oo loogu talagalay 9 Inch LED nalka hore, khadka goos gooska ah ee fiiqan ee soosaarka iftiinka sare wuxuu hubinayaa INAAN indhaha ka qarsan kuwa kale indhahooda iyadoo la siinayo aragtida ugu ifka iyo baaxada weyn.
Waxay ka samaysan tahay guryaha PC-ga iyo lens-ka polycarbonate, xoog weyn iyo miisaan fudud. Dareemid iyo gariir la'aan. Guryo si adag u xiran, Biyo-mareenka IP68, Nolosha-nolosha waxay gaarayaan 100000hrs. Waxay u shaqeysaa sifiican waxayna siisaa khibrada ugu fiican ee wadista ee lamadegaanka, cimilada qiiqa leh ama ceeryaanta roobka.
On nalka hore ee OEM JL waxaa ku yaal fur furfuris ah, waxaad ku dhex wareejin kartaa saddexda qaybood ee jira si aad u hagaajiso qaabka iftiinka.
Qaabka dogob weynaha.
Isku hagaajinta kor / hoos
Si fiican loo dhisay.
Nalalka hore ee Morsun Led waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo beddelka suuqa kadib Jeep Wrangler, Nalalka nalka hore ee tayada sare leh ayaa hogaaminaya hubi inaad Jeep Wrangler ayaa diyaar u ah wadada iyo raadadka. Kuwani laydhadhka hore ee loogu talagalay Jeep Wrangler waxaa lagu dhisay muraayad bajaajle ah iyo biyo-diid IP67, waxaa loo isticmaali karaa deegaanno kala duwan.
Waxaan ku faaneynaa inaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha iyo dhoofinta nalka hore ee laydhadhka tayo sare leh Jeep Wrangler qiimo macquul ah. Iyada oo tayo sare leh Jeep Wrangler nalka hore ee guriga macaamiisheennu waxay helayaan wax soo saar iftiin oo tayo sare leh marka la barbar dhigo kuwii asalka ahaa. Intaa waxaa sii dheer, guryaha aluminium ee gaarka ah waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuwo aan biyuhu ka hortagin, ka-hortagga daxalka iyo kala-baxa kuleylka degdega ah si loo kordhiyo nolosha nalalka hore. Iftiimiyaashayada hore waxay leeyihiin 12 bilood oo damaanad ah taas oo macnaheedu yahay waxaan ku bixin doonnaa adeeggayaga ugu fiican ee muddada damaanadda si aanad waligaa uga baahnayn inaad ka walwasho isticmaalka nalalkayaga.